AKHRI-Gudiga taakulaynta dhaawacyadii Galkacyo oo lagu dhawaaqay. – Radio Daljir
Agoosto 26, 2016 11:49 g 0
Galkacyo, Aug 27 2016–Dawlada Puntland ayaa waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday Gudiga Gurmadka dadkii ku waxyeeloobay Qaraxyadii ay Kooxda Alshabaab ku weerartsy magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug Axadii ay bishani ahsyd 21ka, kaasoo ay ka dhasheen Khaaro wayn oo Naf iyo maalba ah.
Dadaad u badan oo 50 kot u dhaafaya ayaa dhaawacyo kasoo gaareen iyagoo qaarkood ay yihiin kuwo halis ah una baahan Caawimasd.
Xubnaha Gudiga Gurmadka ayaa kala ah:
1 Suldaan Cabdisalaan.
2 Prof. maxamed jaamac salaad.
3 Aadan maxamed cigaal.
4 cabdifitaax Maxamed Sugule.
5 xasan maxamed khaliif
6 maxamuud yaasiin axmed
Muwaadin Fadlan ka qayb qaado GURMADKA dalkaaga iyo dadkaaga waana arin aad mudnaanteeda u leh ee GACMO WADAJIR BAY WAX KU GOOYAANE u gurmo dadkaaga iyo dalkaaga.
Maanta maamulka iyo shacabka Gaalkacyo waxay kaaga baahan yihiin TAAKULAYN ee dhamaan Jaaliyaddaha Puntland ee Aduunka dacaladiisa ku nool iyo shacabka ku nool Puntland waxay reer Gaalkacyo idinka baahan yihiin GURMAD DEG DEG AH.
DHEGEYSO-Siyaasi Tarsab-(Lacagta lagala baxay bangiga waa qorshe ladejiyey).